Art is My Life: အော်သံ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:57 PM
ရေရေလည်လည် ရီရတယ်ဗျာ. ဘယ်လိုဘယ်လို ဖတ်လို့ပြီးသွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။
ကျွန်တော့်နာမည်က အဆစ်ပါလိုက်သေးတယ်။ ကောင်မလေးအကြောင်းရေးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်နဲ့ စာအုပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို မသိမသာ တမင်သက်သက် ချန်သွားတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ရပါတယ်. ရပါတယ်ဗျာ.
“ဟေး….”ဒါက မီးလာလို့ ပျော်တာ။ “ဟာ…” ဒါက သိတဲ့အတိုင်း။